Kwintliziyo ye-Udine, kwi-alley ...
... apho ukuhla (ikwi-Via Pellicerie) ukwisinye sezona zikwere zihle kakhulu e-Italiya, i-piazza Matteotti okanye i-San Giacomo, njengoko abemi base-Udine bayibiza njalo: indawo encinci ekhululekile, enomtsalane, elungele abantu bathanda izinto ezintle ukuze banandiphe ngeemvakalelo nangentliziyo yabo yonke.
Ndisandula ukuyinikezela, ndiyinika ukubamba ubuntu kunye nokufudumala, emva kokukhetha iiwodrophu ezinkulu, izinto eziluncedo zangoku kunye noyilo oluhle. Ibhedi ikhululekile kakhulu, ibhedi enkulu yeqeen, "inxibe" kakuhle; igumbi lokuhlambela lineshawa entle; ikhitshi ineepleyiti zokungenisa kunye nefriji. Nceda, jonga enye ikumgangatho omnye ufowunela uSULLA CORTE NEL CENTRO DI UDINE: ungayifumana ichaza kwiprofayile yam apha, incinci kancinci kwigumbi lokuhlala kodwa inegumbi lokuhlambela elikhulu kwaye lizolile, kuba iifestile zikwintendelezo engaphakathi kwesakhiwo.
4.67 ·Izimvo eziyi-154
4.67 out of 5 stars from 154 reviews
4.67 · Izimvo eziyi-154
Sisembindini, sihla sisePiazza San Giacomo, okanye iMatteotti, okanye i-delle Erbe (amagama maninzi, kodwa isikwere sisodwa!); I-Via Mercatovecchio sisitrato esihambelanayo kwaye iYunivesithi isondele kakhulu; Iimitha ezili-100 kukho iNqaba kunye neLoggia del Lionello; bavale, iCathedral kunye necawe yePurity enemifanekiso eqingqiweyo kaTiepolo. Ithiyetha iSan Giorgio, iGiovanni da Udine kunye nePalamostre yimizuzu nje embalwa yokuhamba okumnandi. Kwaye ezininzi, iithaveni ezininzi, iibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile ezimnandi: isiphithiphithi sokungcamla wonke umntu!
Ndiza kuzama ukuza kukubulisa: Ndiyazi ukuba yintoni umfowunelwa wokuqala onokuthi ubaluleke;) emva koko kuxhomekeke kuwe ukwenza isigqibo sokuba lingakanani ixesha lokwabelana nam. Njengomhambi, ndiyazi ukuba ixesha lisisixhobo esixabisekileyo: Ndingakunika lula ukufumana ulwazi malunga nesixeko kunye nazo zonke izinto ezilungileyo esizinikezelayo!
Ndiza kuzama ukuza kukubulisa: Ndiyazi ukuba yintoni umfowunelwa wokuqala onokuthi ubaluleke;) emva koko kuxhomekeke kuwe ukwenza isigqibo sokuba lingakanani ixesha lokwabelana nam…